स्थानीय सरकार राज्यकोषको दोहन गर्दै, ठेकेदारलाई सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी – www.janabato.com
४ श्रावण २०७७, आईतवार ०३:०० July 19, 2020 Janabato Online
साउन ४, बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिल नै मुख्य प्रशासनिक कार्यालय भवन निर्माण गर्न काठमाडौंको निर्माण कम्पनी शिवशक्ति जेवीसँग ४३ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौतामा निर्माण सामग्रीको मूल्य कम्तीमा १० प्रतिशतले घटबढ भएको अवस्थामा मूल्य समायोजन दिने भन्ने उल्लेख छ । तर, उपमहानगरपालिकाले सम्झौतामा उल्लिखित सुत्र प्रयोग नगरी फरक सूत्र प्रयोग गरेर निर्माण कम्पनीलाई ६९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बढी बुझाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समायोजन गर्दा सम्झौता विपरित गरिएकाले निर्माण कम्पनीलाई बुझाइएको उक्त अतिरिक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ । यद्यपी, उपमहानगरपालिकाको यसमा बिमती छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चक्रपाणी शर्माले प्रतिवेदनसँग उपमहानगरपालिका सहमत नरहेको बताए । उनले सम्झौता विपरित एक रुपैयाँ पनि अतिरिक्त रकम भुक्तानी नगरिएको दाबी गरे । ‘यसमा महालेखाले नै त्रुटी गरेको छ ।’ –उनले भने ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले नै वडा नं. १ र २ मा पर्ने खोलामा कृतिम (ड्याम) जलाशय निर्माणमा उपभोक्ता समितिलाई निर्माण कार्यको लागि जिल्ला दररेटभन्दा निकै धेरै भुक्तानी गरेको छ । जिल्ला दररेटअनुसार प्रति घनमिटर दुई सय ९५ रुपैयाँले भुक्तानी गर्नुपर्नेमा तीन सय ९८ ले भुक्तानी गरी २४ हजार पाँच सय ३३ घनमिटरको २५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ । महालेखाले बडी भुक्तानी गरिएको रकम असुल गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।
← अर्घाखाँचीमा स्कार्पियो दुर्घटना, एकजनाको मृत्यु
दलालहरुद्धारा हडपिएको सार्वजनिक जग्गा जनसरकारद्धारा कब्जा →
अरुण–३ सम्झौता : ओली–दाहालको गम्भीर राष्ट्रघात
२६ बैशाख २०७५, बुधबार ०४:५१ Janabato Online Comments Off on अरुण–३ सम्झौता : ओली–दाहालको गम्भीर राष्ट्रघात
कम्युनिस्ट पार्टीमा शुद्धीकरण किन ?
१६ भाद्र २०७७, मंगलवार ०५:०९ Janabato Online Comments Off on कम्युनिस्ट पार्टीमा शुद्धीकरण किन ?